Nhau - Ndeupi musiyano uripo pakati pe lithium bhatiri nelead acid bhatiri?
Ndeupi musiyano pakati pe lithium bhatiri uye lead acid bhatiri?
Lithium ion bhatiri inoreva bhatiri rechipiri umo Li+ yakamisikidzwa komboni yakanaka uye yakaipa.
Lithium inosanganisa LiXCoO2, LiXNiO2 kana LiXMnO2 inoshandiswa mune yakanaka electrode.
Lithium - carbon interlaminar compound LiXC6 inoshandiswa mumagetsi asina kunaka.
Electrolyte inonyungudika ne lithium munyu LiPF6, LiAsF6 uye mamwe organic mhinduro.
Mukuchaja uye kuburitsa, Li + inoiswa mukati uye yakamisikidzwa kumashure nekudzoka pakati pema electrode maviri, ayo anoshevedzwa kunzi "rocking chair bhatiri".Pakuchajisazve bhatiri, Li + inobviswa kubva kune yakanaka electrode uye yakaiswa mukati meiyo negative electrode kuburikidza ne electrolyte, iyo iri mu lithium-rich state.Zvakapesana ndezvechokwadi pakubvisa.
Uye chimiro chelead-asidhi bhatiri ndeichi: kemikari simba musimba remagetsi rinodaidzwa kuti kemikari bhatiri, rinowanzo kunzi lead-asidhi bhatiri.Mushure mekubuda, inogona kubhadharwa kuti igadzirise zvinhu zvemukati zvinoshanda - kuchengetedza simba remagetsi semakemikari simba;Simba remakemikari rinoshandurwa kuva simba remagetsi zvakare apo kubuda kunodiwa.Aya mabhatiri anodaidzwa kuti Storage mabhatiri, anozivikanwawo sesekondari mabhatiri.Iyo inonzi lead-acid bhatiri imhando yemagetsi emagetsi anochengeta kemikari simba uye anoburitsa simba remagetsi kana zvichidikanwa.
2, kuchengetedza kuita kwakasiyana
Lithium bhatiri kubva kune cathode zvinhu kugadzikana uye yakavimbika dhizaini dhizaini, lithium iron phosphate bhatiri yave yakasimba bvunzo chengetedzo, kunyangwe mumhirizhonga ine chisimba haizoputika, lithium iron phosphate thermal stability yakakwira, electrolytic liquid liquid okisijeni kugona kwakaderera, saka kuchengetedzwa kwakanyanya.(Asi pfupi pfupi kana kuputsika mukati diaphragm inogona kukonzera moto kana kupisa)
Lead-asidhi mabhatiri anoburitsa gasi panguva yekuchaja uye kuburitsa kana kushandisa.Kana iyo gomba rekuburitsa rakavharwa, rinotungamira kuputika kweiyo gasi yekuburitsa sosi.Mvura yemukati ndiyo inonzi sputtering electrolyte (dilute sulfuric acid), iri corrosive liquid, inoparadza zvinhu zvakawanda, uye gasi rinogadzirwa pakuchaja rinoputika.
3. Mitengo yakasiyana
Lithium mabhatiri anodhura.Mabhatiri eLithium anodhura zvakapetwa katatu pane mabhatiri e-lead-asidhi.Yakasanganiswa nekuongorora kwehupenyu hwesevhisi, iyo imwe mari yekudyara ichiri hupenyu hurefu hwemabhatiri e lithium.
Mutengo webhatiri re-lead-acid inotangira kubva kumazana mashoma kusvika kune akati wandei zviuru zveyuan, uye mutengo wemugadziri wega wega wakada kufanana.
4, dzakasiyana girini kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza
Lithium bhatiri zvinhu zvisina chero chepfu uye zvinokuvadza bhatiri munyika, bhatiri harina kusvibiswa mune zvese kugadzirwa uye kushandiswa, zvinoenderana neEuropean RoHS mirau, yakasvibira kuchengetedza bhatiri.
Kune mutobvu wakawanda mumabhatiri e-lead-asidhi, ayo anosvibisa nharaunda kana akaraswa zvisina kunaka.
5. Upenyu hwekutenderera kwebasa
Lithium-ion mabhatiri anogara kwenguva refu kupfuura lead-asidhi mabhatiri.Nhamba yekutenderera yelithium bhatiri inowanzotenderedza 2000-3000 nguva.
Lead-asidhi mabhatiri ane akatenderedza 300-500 cycles.
6. Weight simba density
Iyo simba density yelithium bhatiri kazhinji iri pakati pe200 ~ 260Wh / g, uye lithium bhatiri i3 ~ 5 nguva yelead acid, zvinoreva kuti lead acid bhatiri i3 ~ 5 nguva yelithium bhatiri ine simba rakafanana. .Naizvozvo, lithium bhatiri rinotora mukana wakakwana mukureruka kwesimba rekuchengetedza mudziyo.
Mabhatiri elead-asidhi anowanzo kubva pa50 wh/g kusvika pa70wh/g, ane simba rakaderera uye akanyanya kuwanda.
7. Kuwanda kwesimba
Mabhatiri eLithium-ion anowanzo kuve nekuwanda kwevhoriyamu kanokwana ka1,5 kuya kwemabhatiri e-lead-asidhi, saka anenge madiki ne30 muzana pane mabhatiri e-lead-asidhi yesimba rimwe chete.
8. Kusiyana kwekushisa kwakasiyana
Kushanda tembiricha ye lithium bhatiri ndeye -20-60 madhigirii celsius, uye thermal peak ye lithium iron phosphate bhatiri inogona kusvika 350 ~ 500 degrees Celsius, uye inogona kuburitsa 100% kugona pakupisa kwakanyanya.
Iyo yakajairika tembiricha yekushandisa yelead-asidhi bhatiri ndeye -5 kusvika 45 madhigirii celsius.Kune yega yega 1 degree inodzikira tembiricha, huwandu hwebhatiri hunodzikira neinosvika 0.8 muzana.